ရွှေဖရုံသီးချောကလက် Chip ကွတ်ကီးများ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဘယ်သူမျှမဖုတ် mini ကိုဒိန်ခဲ Nilla န့်
ရွှေဖရုံသီးချောကလက် Chip ကွတ်ကီးများ နူးညံ့ပြီးစိုထိုင်းသော cookie တစ်ခုသည်ပြီးပြည့်စုံသောဖရုံသီးအရသာရှိသည်။
ပြိုလဲဤမျှလောက်များစွာသောအရာများအတွက်အချိန်အချက်ပြ။ ကျောင်းသို့ပြန်ခြင်းနှင့်ရာသီဥတုအေးခြင်းပြန်လာခြင်း။ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးဖရုံသီးချက်ပြုတ်နည်းများမုန့်ဖုတ်နောက်ဆုံးနှင့်ပေမယ့်အနည်းဆုံး!
ကျနော်တို့တာရိုးရာအသုတ်ကိုချစ်သလောက် ပြီးပြည့်စုံသောချောကလက် Chip Cookies တစ်ချိန်က hits ကျသွားတယ်, ငါအားလုံးမှရွှေဖရုံသီးထည့်ရန်အဆင်သင့်ပါပဲ။ က အရာ။
ဤလွယ်ကူသောရွှေဖရုံသီးချောကလက်ကွတ်ကီးများသည်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖရုံသီးလိုင်းနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။ ငါ့ကိုငါကော်ဖီခွက်တစ်ခွက်သို့မဟုတ်နို့တစ်ခွက် ပေး၍ ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသည်။
ရွှေဖရုံသီးချောကလက် Chip Cookies ပြုလုပ်နည်း
fluffy သည်အထိထောပတ်, သကြားနှင့် vanilla အတူတကွရောမွှေပါ။ ဖရုံသီးသန့်စင်ခြင်းနှင့်ကြက်ဥထည့်ပါ။
ဒီဖရုံသီးကွတ်ကီးမုန့်တွေကိုသင်မီးဖိုထဲကယူပြီးအောက်ခြေမှာအညိုရောင်ပြောင်းတဲ့အခါဗဟိုမှာအနည်းငယ်မကျန်အောင်ထားသင့်တယ်။ ဤသည်ပျော့ပြောင်းပြီး chewier cookie ကိုထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရုံထဲမှာလိုပဲ ငှက်ပျောကွတ်ကီး , ဖရုံသီးသည်ဤအစိုဓာတ်ကိုထပ်ပြောသည်။ ဟုတ်တယ် အရေးကြီးတယ် ဒီ cookies တွေက texture ကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိရပါ ပိုပြီးကိတ်မုန့်ကဲ့သို့ (ဘယ်လိုဆင်တူတဲ့လုံလုံကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လျှင် ငှက်ပျောပေါင်မုန့် ဒါကြောင့်ထိုင်ပြီးနောက် moister ရရှိသွားတဲ့။
သငျသညျဖရုံသီးချောကလက် Chip ကွတ်ကီးတွေကိုမုန့်ဖုတ်မီသို့မဟုတ်အပြီးဖြစ်စေဤသည်ပြီးပြည့်စုံသော cookie ကိုအောင်, အေးခဲနိုင်ပါတယ်!
သငျသညျဖရုံသီးနှင့်ချောကလက်များအတွက်တပ်မက်ရှိပါကခြစ်ရာကနေဒီရွှေဖရုံသီးချောကလက် Chip ကွတ်ကီးပြီးပြည့်စုံသောပြင်ဆင်ချက်များမှာ! တစ်ခုချင်းစီကိုကိုက်အတွက် Ooey gooey ကောင်းမြတ်ခြင်း!
hash browns နှင့်အတူလုပ်အစားအစာများ
ရွှေဖရုံသီး pancakes - မနက်စာအတွက်အချိုပွဲစားခြင်းလိုပဲ
ရွှေဖရုံသီး - ကော်ဖီနှင့်အကောင်းဆုံး
fluffy ဖရုံသီး Pie Dip - စာဖတ်သူအကြိုက်ဆုံး
ဖရုံသီး Pie လခြမ်း - ဒါလွယ်ကူပါတယ်။
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁၄ မိနစ်များ ရေခဲသေတ္တာဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၃။ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၂၈ ကွတ်ကီးများ စာရေးသူHolly Nilsson ချောကလက်ချစ်သူများနှင့်တင်ထားသောနူးညံ့သောဖရုံသီးပိုင်ကွတ်ကီများသည်ကျဆုံးသွားသောအကြိုက်ဆုံးကွတ်ကီးဖြစ်သည်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဖရုံသီးပိုင်အမွှေးအကြိုင်
▢½ ခွက် ထောပတ် အနည်းငယ်ပျော့
▢½ ခွက် သကြားညို ထုပ်ပိုး
▢½ ခွက် သကြားဖြူ
▢¾ ခွက် စင်ကြယ်သောဖရုံသီး
▢1 ½ ခွက် ချောကလက်ချစ်
ကြီးမားသောပန်းကန်လုံးတွင်ထောပတ်၊ အညိုရောင်သကြား၊ ဖရုံသီးစင်နှင့်ကြက်ဥထည့်ပြီးကောင်းစွာရောမွှေပါ။
၁ ½ဇွန်းတစ်ဇွန်းကိုသုံးပြီး၊ အမဲဆီမထည့်သော cookie စာရွက်များကိုချပါ။ 15 မိနစ်ရေခဲသေတ္တာ။
ကွတ်ကီးများကိုအနည်းငယ် နှိပ်၍ ၁၄-၁၆ မိနစ်ခန့်မီးဖို၌ဖုတ်ရမည်။ ကွတ်ကီးစာရွက်ပေါ်တွင်ဝါယာကြိုးထိန်သိမ်းတစ်ခုသို့မဖယ်ရှားမီ ၂ မိနစ်ခန့်အအေးခံပါ။
သော့ချက်စာလုံးဖရုံသီးချောကလက် chip ကို cookies တွေကို, ရွှေဖရုံသီး cookies များကို သင်တန်းကွတ်ကီး၊ အချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။